Ethnic Nationalities Voice တိုင်းရင်းသားအသံ: October 2008
ဒီနေ.နိုဝင်ဘာလ(၁)၇က်နေ.၊ညနေ(၃)နာရီမှစတင်ဖွင့်လှစ်မည့်တပ်ဆင်ထောက်ခံသူများ၏အဏာရှင်ဆန်.ကျင့်ရေးအင်း အားပြအခမ်းအနားတစ်ခုကို ဘန်ကောက်မြိူ.ရှိ ရာဇမင်္ဂလအားကစားကွင်းတွင်ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသည်၊ဒီအခမ်းအနားကိုအစိုး ရထောက်ခံသူများ ငါသောင်းအထိလာရောက်စုရုံးမည်လို.ခန်.မှန်ပါသည်၊ထို.ကဲ့သို. စုရုံးရောက်လာသူများကို တပ်ဆင် ကမိန်.ခွန်းပြောကြားမှာဖြစ်ပါသည်၊ တပ်ဆင်မိန်.ခွန်းပြောမည့်အစီအစဉ်ကို (ယနေ.အမှန်တရား Today's Truth)လို.ခေါင်း စဉ်တပ်ထားပါသည်၊
တပ်ဆင်ဟာထိုင်းနိုင်ငံသားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ရှိတယ်လို. သူ.၏ပါတီဝင် ဟောင်းများဖြစ်သောလက်ရှိအာဏာရပါတီကကာကွယ်ပြောဆိုနေပေမဲ့တပ်ဆင်ပြောကြားမည့်မိန်.ခွန်းစကားအားလုံးကိုထိုင်း အထက်တရားရုံကအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ပြီးမှတ်တမ်းတင်ထားမည်လို. ပြောပါသည်၊တပ်ဆင်၏မိန်.ခွန်းစကားတွင်အကယ်၍ ထိုင်းတရားရုံကိုစော်ကာလို.ရှိရင် တရားရုံအနေနဲ.ထောင်ဒဏ်(၁)နှစ်မှ(၇)အထိအရေးယူနိုင်မည့်လို.သိရှိရပါသည်၊
တပ်ဆင်အာဏာရှိစဉ် အစိုးရပိုင်မြေများဈေးသက်သက်သာသာဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်ရေးအတွက်သူ.၏ဇနီးအားကူညီခဲ့သောကြော င့်ပြစ်မှုထင်ရှားပြီးသူ.ကို ထိုင်းအထက်တရားရုံက ထောင်ဒဏ်(၂)နှစ်ချမှတ်ထားပါသည်၊
အခုလောလောဆယ်တပ်ဆင်နှင့်ဇနီးနှစ်ယောက်ဟောင်ကောင်တွင်ရောက်ရှိနေသည် ဟုသတင်းထွက်ပေါ်နေပါသည်၊ တပ်ဆင်မိန်.ခွန်းတွင်ပြောကြားမည့်အကြောင်းတွေကိုထိုင်းပြည်သူလူထုတွေသာမကကမ္ဘာ.အရပ်ရပ်ကသတင်းထောက် များလည်စိတ်ဝင်တစားစောင့်ကြည့်နေကြပါသည်၊အစိုးရထောက်ခံသူများနှင့်ဆန်.ကျင်သူများအကြာထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုမ
Thailand's Thaksin to Phone In to Bangkok Stadium Rally Tonight
Nov. 1 (Bloomberg) -- Former Thai Prime Minister Thaksin Shinawatra is scheduled to speak throughatelephone hookup to about 50,000 supporters ataBangkok stadium tonight, his first live address since being convicted of corruption last month.
``The people who organize the demonstration have told him that the theme of the event would be against the coup,'' said Chaturon Chaiseng,aformer member of Thaksin's party who will also address the crowd tonight. ``It will have nothing to do with him personally, or his individual problems.''
Thailand's Supreme Court found Thaksin guilty last month of helping his wife buy land from the government, his first conviction since the military ousted him ina2006 coup. Thaksin skipped bail in August and fled to the U.K. with his wife, Pojamarn Shinawatra, who was sentenced to jail for tax evasion.
Thaksin's speech may inflame an increasingly violent political standoff between anti-government protesters who despise him and the ruling People Power Party led by Prime Minister Somchai Wongsawat, the former leader's brother-in-law. The mostly middle-class People's Alliance for Democracy opposes any party linked to Thaksin and has vowed to protest until the People Power Party is out of power.
``There is no peaceful resolution to this crisis unless one side backs down,'' said Ismail Wolff, an analyst with PSA Asia,aBangkok-based security and risk assessment consulting firm. ``History is likely to repeat itself here, and violence, it seems, is becoming increasingly inevitable.''
The People's Alliance has occupied the prime minister's office since Aug. 26. They clashed with police last month after they surrounded the Parliament building, leading to two deaths. They want Thaksin's allies ousted and seek the setting up ofanew political system to water down the influence of his powerbase of poor, rural voters.
`Hitler of Thailand'
``Thaksin is the Hitler of Thailand,'' Chokchuang Chutinaton,aretired doctor andamember of the People's Alliance for Democracy, said at an anti-government rally this week. ``He has invaded our minds, our courts, the local press and 95 percent of the foreign press.''
The People Power Party, the successor to Thaksin's Thai Rak Thai, won last year's election with the help of farmers in northeast Thailand attracted to its policies of cheap health care and microcredits. The government has increased spending in rural areas to counter the effects of slowing global economic growth.
``If society is allowed to talk and really think and express its opinion, in the future most people will come to the conclusion that Thailand has to be democratic,'' former Thaksin party member Chaturon said. ``As long as there is no coup, there is no way that the People's Alliance will succeed.''
The pro-government group plans continuous rallies to counter the People's Alliance for Democracy and pre-empt any coup attempts. Thailand has had 10 coups since scrapping its absolute monarchy 76 years ago.
Thaksin also faces criminal charges over his cabinet's 2003 approval ofastate-run lottery,aloan extended to Myanmar to buy equipment from his family's former business and alleged manipulation of telecommunications and tax policies for personal gain. A related civil case against him is seeking to confiscate almost $2.2 billion.
To contact the reporter on this story: Daniel Ten Kate in Bangkok at dtenkate@bloomberg.net;
အပစ်ခတ်အဖွဲ.တွေလက်နက်ချရန်ဖိအားပေးမည် မဟုတ်ဟု အရှေ.တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူးပြော၊
အပစ်ခတ်အဖွဲ.တွေလက်နက်ချရန်ဖိအားပေးမည် မဟုတ် ဟု အရှေ.တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူးပြော၊
Armed ethnic cease-fire groups won't be pressured to disarm, says Southeast Command
Wed 22 Oct 2008, IMNA
The State Peace and Development Council is not going to pressure ethnic cease-fire groups to surrender their arms, says the commander of the Southeast Command, based in Mon State's capital city of Moulmein.
The Mon National Liberation Army (MNLA), the armed wing of the New Mon State Party (NMSP), will not be pressured to disarm, said the commander, General Thet Naing Win.
General Thet Naing Win told New Mon State Party (NMSP) officers that the NMSP does not have to worry about surrendering. Even as an armed group, the general said, the party could continue cooperating with the regime.
IMNA sources in the NMSP, however, expressed skepticism. Burma's new constitution grants control of armed groups to the ministry of defense, the sources pointed out. Telling the NMSP it won't be pushed to surrender amounts to sleight of hand,atrick designed to distract the party, one of the sources charged.
According to NMSP officers inside Mon State, the MNLA will never agree to be under regime control and will never surrender its arms. The MNLA and NMSP will also never separate, the officers said.
According to the officers, the party will not necessarily abide by the regime's new constitution. According to the regime, the new constitution was approved by 92% of voters inaMay 2008 referendum. The referendum, however, has been almost universally condemned as an undemocratic sham.
The drafting process of the constitution was also flawed, say opposition sources, who point out the key voices were excluded. Though the NMSP initially participated inaNational Convention held to craft the document, the party opted out in frustration. Observers were sent later in 2006, but did not provide input.
The junta has scheduled elections for 2010, but an NMSP spokesperson has said the party will not participate. Inameeting called by the Southeast Command three weeks ago, General Thet Naing Win told the party that its stance on the election could impact peace in Mon State. The NMSP and the SPDC signedacease-fire in 1995.
ကြံ့ဖွံ့အသင်းဝင်၏ကျွဲ လျှပ်စစ်ဌာနပိုင်ရာဘာခြံတိုးကျွံ ကျပ်သိန်းချီပေးလျော်ရ
Wednesday, 22 October 2008 17:16
ကြံ့ဖွံ့အသင်းဝင်ပါက မျက်နှာပန်းလှမည်၊ အခွင့်ထူးရမည်ဟုယူဆသူ သျှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်း မိုင်းယန်းဒေသခံကြံ့ဖွံ့အသင်း သား တစ်ဦး ၎င်းင်း၏စားကျက်လွှတ်ကျွဲ လျှပ်စစ်ဌာနပိုင်ရာဘာခြံတိုးကျွံသဖြင့် ကျပ်သိန်းချီပေးလျော်ရကြောင်းနယ်စပ် သတင်းရပ်ကွက် က ဆိုပါသည်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်လောက်က ကြံ့ဖွံ့အသင်းဝင်ထားသူ မိုင်းယန်းမြို့ဝမ့်ဟော့ကန်ရွာသား စိုင်းပျဲန်းဆိန့် (အသက် ၅၁ နှစ်) သည် လျှပ်စစ်ဌာနပိုင် ရာဘာခြံအနီး လယ်ကွင်းထဲ စားကျက်လွှတ်ထားရာမှ ၎င်းင်း၏ကျွဲများ ရာဘာခြံအတွင်းဝင်ရောက် ခြင်းဖြစ်ပြီး လျှပ်စစ်ဦးစီးမှူး ဦးကျော်နိုင်က ကျွဲတစ်ကောင် ကျပ်ငါးသောင်းဖြင့် ပြန်ရွေးရန်လျော်ကြေးအဖြစ်ဒဏ်ရိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟုဆို၏။
“ ကြံ့ဖွံ့ အသင်းဝင်ရင် အခွင့်ထူးလေး ဘာလေးရမယ်ထင်လို့ပေါ့။ အခု သူ့ကျွဲ ၆ ကောင် ရာဘာခြံတိုးတဲ့ကိစ္စ ဖြစ်လာရော ဘယ်သူ့ကိုမှ သူအားကိုးလို့မရဘူး။ ရယက ဥက္ကဌ ကလဲ သွားကူပြောပေးတယ်။ ဘယ်လောက်ဘဲ တောင်းပန်ပြောပြော လျှပ်စစ် ဦးစီးမှူးက ‘ငွေ ၃ သိန်းနဲ့ ကျွဲပြန် ရွေးရင်ရွေး၊ မရွေးရင် ပုလိပ်ကိုသွားအပ်လိုက်မယ် ’- ဆိုတော့ သူလည်း ကြောက်ကြောက် လန့်လန့်နဲ့အဆင်သင့် ပါလာတဲ့ ကျပ် ၃ သိန်းထုတ်ပေးလိုက်ရတာပေါ့ ” ဟု မိုင်းယန်း ဒေသခံ လယ်သမားတစ်ဦးကပြောပြသည်။
ကျွဲများဝင်သွားသော လျှပ်စစ်ရာဘာခြံမှာ ၂ ဧက ခန့်သာကျယ်ပြီး ရာဘာပင်များ ပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းမရှိ၊ လျှပ်စစ်ဦးစီးမှူးက တမင် သက်သက် စားပေါက်ထွင်ခြင်းသာဖြစ်သည်ဟု မိုင်းယန်းဒေသခံများ ပြောဆိုနေကြသည်။
“အခုကိစ္စကောင်းကောင်းပြန်စဉ်းစားရင် စိုင်းပျဲန်းဆိန့်အစားရင်နာတယ်။ သူက ၀တ်ပါကန်ဘုန်းကြီးကျောင်းဂေါပက အဖွဲ့ဝင်လည်း ဟုတ်တယ်။ အရင်က ကျိုင်းတုံစစ်တိုင်းရုံးတို့၊ ခရိုင်ရုံးတို့ကအာဏာပိုင်တွေလာပြီဆိုရင် လုပ်လက်စ အလုပ်ပစ်ထား၊ ပုဆိုးစိမ်းပြေး ၀တ်ပြီး လူကြီးတွေနောက် တကောက်ကောက်လိုက်ရတာလည်းအမောဘဲ။ကျွဲပြဿနာ ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်း ကြံ့ဖွံ့အသင်းဝင်လည်း ဘာမှမထူးဘူးဆိုပြီး သူငြီး နေတာတွေ့ရတယ်။ အခုပြန်ထွက်ချင်လည်းမလွယ် တော့ဘူးလေ” ဟု ၎င်းင်းနှင့်ခင်မင်ရင်းနှီးသူ မိတ်ဆွေ တစ်ဦးကပြောပြသည်။
မိုင်းယန်းမြို့သည် ကျိုင်းတုံအရှေ့မြောက်ဘက် ၁၀၂ ကီလိုမီတာခန့်အကွာရှိသည်။ လျှပ်စစ်ဌာနပိုင်ရာဘာခြံမှာ မိုင်းယန်းမြို့ အရှေ့ ဘက် ဆီလူးသို့ အထွက်လမ်းတွင်ရှိသည်။ ခြံမှာ ၂ ဧကခန့်သာကျယ်ပြီး ရာဘာပင် ၃၀-၄၀ ခန့်သာရှိသည်။
နအဖစစ်တိုင်းမှူးများ ဆက်တိုက် စည်းရုံးရေးဆင်း၊ အပစ်ရပ်အဖွဲ့များလဲ စစ်ရေးပြန်လေ့ကျင့်
Wednesday, 22 October 2008 09:35
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်သည့်အနေဖြင့် လက်နက်ကိုင် အပစ်ရပ် တပ်ဖွဲ့များလက်နက်နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေး လဲလှယ် ရန်/ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်/ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရန် နအဖစစ်တိုင်းမှူးတို့ အဆက်မပြတ်စည်းရုံးရေးဆင်းနေသကဲ့သို့ အပစ်ရပ်အဖွဲ့များ အတွင်း အရာရှိမွမ်းမံသင်တန်းများ၊ စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုများပြလုပ်နေသည်ကိုတွေ့ရကြောင်း နယ်စပ် သတင်းရပ်ကွက်ကဆိုပါသည်။
ယခုလ ၁၉ ရက်နေ့က တြိဂံ ဒုတိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်ဝေလင်း ၊ တြိဂံတိုင်း ဂျီဝမ်း ဗိုလ်မှူးကြီး သန်းထွဋ်သိန်း နှင့် ကျိုင်းတုံခရိုင် မိုင်းခတ် ဗျူဟာမှူး ဗိုလ်မှူးကြီးနေလင်းတို့ ၀ ထိန်းချုပ်နယ်မြေ (ပန်ဆန်းတောင်ဘက်) တရုပ်နယ်စပ်အနောက်ဘက် မိုင်းဖျဲန်၊ ဟိုတောင်းသို့ သွားရောက်လည်ပတ်၍ ဒေသခံ ၀ အာဏာပိုင်များနှင့် ထပ်မံသွားရောက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြန်၏။
“ကား ၆ စီး ၇ စီးလောက် ပါသွားတယ်။ မိုင်းယန်းမြို့ မြောက်ဘက် မိုင်းဖျဲန်-ဟိုတောင်းကိုသွားပြီး ၀ အရာရှိတွေနဲ့ စကားပြော တယ်။ ပြီးတော့ (တပ်မဟာ ၃၆၉ ဌာနချုပ် ဆီလူး) ထိန်းချုပ်နယ်မြေကိုဆက်တိုက်ဖြတ် NDAA အပစ်ရပ် အထူးဒေသ ၄ မိုင်းလား ဌာနချုပ်အထိ ဆင်းသွားတယ်။ မိုင်းလားမှာရှိတဲ့အကြီးအကဲတွေနဲ့သွားတွေ့ပြီး ကျိုင်းတုံကို နေ့ချင်းပြန်သွားတယ်လို့ကြားတယ်” ဟု ကျိုင်းတုံ-မိုင်းလား ကားဆရာ တစ်ဦးက ပြောပြ၏။
အခြားတဖက်တွင်မူ UWSA ထိန်းချုပ်နယ်မြေ (ပန်ဆန်းတောင်ဘက်)မိုင်းပေါက်၌ ပြီးခဲ့သည့် ဂျွန်လမှစ၍(ပန်ဆန်းဌာနချုပ် နည်းတူ) နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာသဘောတရား ပညာပေးသင်တန်း၊ စစ်ရေး လေ့ကျင့်မွမ်းမံသင်တန်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟုဆို၏။
“အခု ၃ သုတ်မြောက် လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီ။ ၁ သုတ်မှာ ကေဒါ ၆၀၀ လောက်ရှိတယ်။ ၁ လကြာတယ်။ တပ်စိပ်မှူးကနေ တပ်ခွဲမှူး အထိ အဲဒီသင်တန်းတွေ သွားတက်ရတယ်”ဟု အပစ်ရပ် ၀ အဖွဲ့နှင့်နီးစပ်သူ ကျိုင်းတုံသားတစ်ဦးက ပြောပြသည်။
၎င်းနှင့်ပတ်သက်၍ တရုပ်နယ်စပ်အခြေစိုက် နိုင်ငံရေး စစ်ရေးလေ့လာသူတစ်ဦးက“ နအဖစစ်တိုင်းမှူးတွေကလဲအပစ်ရပ် နယ်မြေ တွေထဲအထိ ကွင်းဆင်းစည်းရုံးတယ်။ မြောက်ပိုင်းဝတပ်ဖွဲ့က စစ်ရေးမွမ်းမံလေ့ကျင့်နေတယ်။ တောင်ပိုင်းဝ တပ်ဖွဲ့တွေ စီးပွါးရေးကိုဘဲ ဇောက်ချလုပ်နေတာတွေ့ရတယ်။ ဘယ်သူက တကယ်တမ်းဘယ်လမ်းလျှောက် နေတယ်ဆိုတာ တစ်နှစ်တာကာလအတွင်းမှာ ကောင်းကောင်းသိလာနိုင်တယ်” ဟုဆိုပါသည်။
သျှမ်းပြည်တပ်မတော် SSA တောင်ပိုင်း ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်မှူးကြီးယွက်စစ်ကလည်း “ အပစ်ရပ်အဖွဲ့ထဲက စီးပွါးရေးသမားနဲ့ မျိုးချစ် ပြည်ချစ်တော်လှန်ရေးသမား တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ဘယ်လောက်အမှီသဟဲပြုနိုင်ကြမယ်ဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရဦးမှာပေါ့။ ကြာရှည်လက် တွဲသွားဖို့တော့မလွယ်ဘူးလို့ ကျနော်ထင်တယ်” ဟု ယခုလ ၂၀ ရက်နေ့က လွယ်တိုင်းလျဲန်းဌာနချုပ်၌ ပြောခဲ့သည်။
အလားတူ ယခုလ ၆ ရက်နေ့ကလည်း ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာ၊ အုပ်စုဥက္ကဌ အစရှိသော အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာ အကြီးအကဲများ အား သွားရောက်ဆင့်ခေါ်ရှင်းလင်းခဲ့စဉ် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲပြင်ဆင်မှုရှိရန်၊ တိုင်းရင်းသားများအား နိုင်ငံသားကဒ် လုပ်ပေးရန်၊ ရေအား လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ရေးစစ်ဆေးရန်၊ အိမ်ဖုန်းချပေးရန် အကြောင်းပြချက်ဖြင့် တြိဂံစစ်တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဖြိူး ကိုယ်တိုင် မိုင်းဆတ်-မိုင်းတုံ-နားကောင်းမူး၊ ထိုင်းနယ်စပ် ပါခီးတပ်စခန်းသို့ ကွင်းဆင်း၍ တောင်ပိုင်း ၀ တပ်ဖွဲ့စစ်ဒေသ ၁၇၁ မှ အကြီးအကဲများနှင့် ထမင်းလက်ဆုံစားခဲ့သေးသည်ဟု ဆို၏။
အပစ်ရပ်အဖွဲ့များကို စစ်တိုင်းလက်အောက်ခံ တပ်ဖွဲ့အဖြစ် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခိုင်းမည်
Written by ပါးရယ်
Wednesday, 22 October 2008 09:37
မြန်မာစစ်အစိုးရမှ လာမည့် ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ရွေးကောက်ပွဲကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသည့် အနေဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ် တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ်ရှိ အပစ်ရပ် အဖွဲ့အစည်းများကို ၎င်းတို့၏ ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန လက်အောက်တွင် တပ်ဖွဲ့များ အဖြစ်သို့ ပြန်လည်ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းရန်အတွက် စစ်အစိုးရမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက အသိပေးပြောကြားကြောင်း သိရှိရပါသည်။
အဆိုပါ ခေါ်ယူတွေ့ဆုံခြင်းသည် ပြီးခဲ့သည့် စက်တင်ဘာလကုန်ပိုင်းက ရှမ်းပြည်နယ်ကို တာဝန်ယူထားသော က-စ-ထမှူး ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး မင်းအောင်လှိုင်က အပစ်ခတ်ရပ်အဖွဲ့များဖြစ်သော မုန်းလားနှင့် ၀နယ်တောင်ပိုင်း စသည့်အဖွဲ့များကို ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ ကျိုင်းတိုမြို့တွင် ခေါ်ယူအသိပေးခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။
ထိုကဲ့သို့ စစ်အစိုးရက တိုင်းရင်သားလက်နက်ကိုင် ငြိမ်းအဖွဲ့များကို ခေါ်ယူအသိပေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပီပီအယ်အို (ပအိုဝ်းအမျိုးသားပြည်သူ့လွတ် မြောက်ရေးအဖွဲ့)မှ ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်ဥက္ကာက "သူတို့က နံပါတ် ၁ ကတော့ သူတို့ဖြုတ်ချင်တာကတော့ လက်နက်ဖြုတ်ချင်တာပေါ့၊ ဒါပေမယ့် လက်နက်ဖြုတ်လို့မရဘူး၊ လက်နက်ဖြုတ်လို့ မရတဲ့အခါကျတော့ သူတို့လက်အောက်မှာ ရောက်အောင် အုပ်ချုပ်မှု လွဲပြောင်းမယ့် သဘောမျိုးပေါ့၊" ဟု ပြောသည်။
မြန်မာစစ်အစိုးရက လာမည့် ၂၀၁၀ ခုနှစ် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲပြီးသည့် နောက်ပိုင်းတွင် သူတို့က စစ်အစိုးရတပ်ဖွဲ့များ မဖြစ်တော့ခြင်း၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ရွေးကောက်ပွဲကို အနိုင်ရသည့် အစိုးရပုံစံအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရတော့မည် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အပစ်ခတ်ရပ်အဖွဲ့အစည်းများကို အစိုးရ၏ အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင် ရောက်ရှိအောင် ကြိုးပမ်းပြီး ကျုံးသွင်းနေခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်ဥက္ကာက ဆက်လက်ပြောပါသည်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မင်းအောင်လှိုင်၏ ခေါ်ယူတွေ့ဆုံခြင်းအရ အပစ်ရပ်အဖွဲ့များကို လက်နက်များ ချခိုင်းရန်အတွက် မဟုတ်ဘဲ၊ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းမည့် အကြောင်းကိုသာ ကြိုတင်အသိပေးခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်းတို့၏ နှစ်ဦးနှစ်ဘက်တွင် အချင်းချင်း နားလည်မှုထား ရှိရန်နှင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရန်အတွက်သာ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ သို့သော် မည်သည့်အချိန်မျှမှ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခိုင်းမည်ကို အသိပေးမှာကြားခြင်း မရှိသေးကြောင်း သိရသည်။
အကယ်၍ မြန်မာစစ်အစိုးရနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးယူထားသော တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများက စစ်အစိုးရ၏ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင် အမှန်တကယ် ၀င်ရောက်သွားမည်ဆိုပါက ယင်းတို့၏ အနာဂတ်အခြေအနေ ဖြစ်လာနိုင်မည့် တပ်ဖွဲ့များက ဒုတိယလက်နက်ကိုင် စစ်တပ်ဖြစ်ခြင်း၊ ရဲများဖြစ်ခြင်း၊ လုံခြုံရေးများဖြစ်ခြင်းနှင့် ပြည်သူ့စစ်များဖြစ်ခြင်း စသည်များကို ဖြစ်လာနိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။
"အထူးရဲများ အဖြစ်ပေါ့နော်၊ လခပေးပြီး ခံရတာပေါ့၊ ဆက်ဆံမှုကြတော့လည်း နိုင်ငံတော် နအဖတို့ ဆက်ဆံပေမယ့် လခထုတ်ပေးတာ ပြည်ထဲရေးက ထုတ်ပေးတာပေါ့၊ ဒါပေမယ့် ဟိုကျရင် သူက ရဲမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက တိုက်ရိုက်ချုပ်ကိုင်တဲ့ စစ်တပ်တွေအဖြစ် ပြောင်းပစ်မှာပေါ့၊ အဲဒီကျလို့ရှိရင် ပြည်ထဲရေးအခန်းကဏ္ဍ မရှိတော့ဘူး၊ ဆိုတော့ တပ်က တိုက်ရိုက်ကိုင်တော့မှာ၊ သူတပ်နဲ့သူ ဖြစ်သွားတော့မှာ၊ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းရင်းမှူးရဲ့ အောက်မှာ၊ သက်ဆိုင်ရာဗျုဟာမှူးရဲ့ အောက်မှာ၊ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းမှူးရဲ့ အောက်က တပ်တွေ ဖြစ်ကုန်တော့မှာ၊ အဲတော့ ၀တပ်မတော်လည်း မရှိတော့ဘူး၊ ရှမ်းတပ်မတော်လည်း မရှိတော့ဘူး၊" ဟု တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ်က မြန်မာ့စစ်ရေးနှင့် နိုင်ငံရေး လေ့လာသူ ဦးအောင်ကျော်ဇောင်းက လွတ်လပ်သော အာရှအသံ သတင်းဌာနသို့ ပြောကြားခဲ့သည်။
အပစ်ခတ်ရပ်အဖွဲ့အစည်းများက မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်တွင် တပ်ဖွဲ့များအဖြစ်သို့ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်မည့် အခါတွင်လည်း နိုင်ငံတော်တပ်မတော် ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် ညီညွတ်သည့် အဆင့်အတန်းနှင့် အရည်အချင်းများ ရှိဖို့ရန် လိုအပ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်သည် နိုင်ငံတော်တပ်မတော်၏ လက်အောက်သာ ဖြစ်သောကြောင့် အကယ်၍ အဆင့်မမှီသော တပ်ရင်မှူး၊ တပ်ခွဲမှူး၊ တပ်စိတ်မှူးများ ပါရှိပါက ၎င်းတို့၏ နေရာတွင် မြန်မာ စစ်အစိုးရ တပ်မတော်များမှ အစားထိုး အုပ်ချုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရှိရပါသည်။
့နအဖဗမာစစ်ဗိုလ်တွေ မြှောက်ပင့်တိုင်းလုပ်ရင်တော့ မိုက်တာဘဲ။ အဲဒီလို မိုက်တဲ့ရခိုင်တွေ ကျနော်တို့ မွန်ပြည်နယ်မှာ အများကြီးရှိတယ်။ ရိုင်းတယ်။ ရေးမြို့နယ်ဟာ နအဖစစ်တပ် တပ်ရင်း (၁၀)ရင်း တပ်မ တစ်မရှိတယ်။ မြို့နယ်နဲ့ စစ်တပ်နဲ့က လုံးဝကို မလိုက်ဘူး။ စစ်တပ်နေရာအားလုံးဟာ နယ်မြေခံ ကျနော်တို့မွန်တွေရဲ့ နှစ်ရှည်သီးနှံခြံ (ရော်ဘာ၊အုန်း၊ကွမ်းသီး၊ဒူးရင်း၊မင်းဂွတ်၊သံပုရာ၊လယ်စသည်) များကို အတင်းအဓမ္မသိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့မိုက်လို့ သူတို့ခံရတာပါ။ မိုက်တဲ့ကောင်မှန်သမျှ အဲဒီလမ်းအတိုင်းဘဲ သွားရမှာပါ။ စိတ်ဓာတ်အောက်တန်းကျတဲ့ကောင်မှန်သမျှ သူတို့သွားလာရာလမ်းဟာ သေခြင်းနဲ့ ငရဲဘဲ။
October 22, 2008 2:49 AM
ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်၊ဒီလိုပေးပို. ခြင်းသည် တပ်ဆင်၏နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်လျှောက်ထားချက်ကိုအဟန်.အတား
ဒီလိုပြောဆိုချက်သည် ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းချွန်းလီပိုင်က လွန်ခဲ့သော၂၀၀၃ ခုနှစ်ကတည်ကဗျာ ဒိတ်စကားပြောထားခဲ့ပါသည်၊နောက်ဆုံးမှာဘိန်းဘုရင်ခွန်ဇာသွားတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းဆက်လျှောက်မည်ဆိုရင်တပ်ဆင် တစ်ယောက်မြန်မာနိုင်ငံသို.ရောက်သွားနိုင်မယ့်အလာလာရှိနေကြောင်းသုံးသပ်လိုက်ရပါသည်၊
Guilty verdict heads to England
The Supreme Court's Criminal Division for Holders of Political Positions will send its verdict against former prime minister Thaksin Shinawatra to the Office of the Attorney General to forward England.
The court will send both Thai and English versions to Foreign Affairs Department of the Office of the Attorney General to forward to England as evidence against Thakin's request for political asylum in the country.
နအဖတပ်မှ ရခိုင်တပ်ကြပ်တစ်ဦး မွန်ပြည်နယ်တွင် ကျဆုံး
မင်းအောင် (နိရဉ္စရာ) ပလက်ဝ အခြေစိုက် နအဖ ခမရ ၂၈၉ တပ်ရင်းမှ ရခိုင်အမျိုးသား ဒုတပ်ကြပ်တဦးမှာ မွန်ပြည်နယ်တွင် တိုက်ပွဲဖြစ်၍ လွန်ခဲ့သော တနင်္လာနေ့က ကျဆုံးသွားကြောင်း သူ၏ဆွေမျိုး တဦးက ပြောသည်။
ကျဆုံးသွားသူ နအဖစစ်သားမှာ ဒုတပ်ကြပ် ကျော်သူဖြစ်ပြီး ကျောက်ဖြူဇာတိ ဖြစ်သည်။
ကျော်သူမှာ ၁၉၉၆ ခုနှစ်က ကျောက်ဖြူ မြို့နယ် အခြေစိုက် ခလရ ၃၄ သို့ ၀င်ရောက်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် ခမရ ၂၈၉ တပ်ရင်းသို့ လွဲပြောင်းခံခဲ့ရသည်။
၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် ဒုတပ်ကြပ်အဆင့်သို့ ရာထူးတိုးခံရသည်ဟု သူဆွေမျိုးက ပြောသည်။
ခမရ ၂၈၉ တပ်ရင်းမှာ ဇူလိုင်လ ပထမအပတ်က ပလက်ဝမြို့မှ မွန်ပြည်နယ် အရှေ့ တောင်တိုင်း စစ်မြေပြင်သို့ ထွက်ခွာသွားခဲ့သည်။ ၎င်းနောက်ပိုင်း ကျော်သူ တိုက်ပွဲတွင် ကျဆုံး သွားခြင်း ဖြစ်သည်။
မွန်ပြည်နယ်နှင့် ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ စစ်မြေပြင်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ် အခြေစိုက် တပ်ရင်းပေါင်း ၁၀ ရင်းကျော် ရောက်ရှိနေပြီး တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး ပါတီများနှင့် စစ်ပွဲများ ဆင်နွဲနေရကြောင်း သိရသည်။
ထိုသ်ို့ စစ်ပွဲများ ဆင်နွဲရာတွင် ရခိုင်တွေသတ္တိရှိတယ်ဟု အထက် ဗမာ စစ်အရာရှိများက မြှောက်ပင့်ပေးမှုအပေါ် ရခိုင်စစ်သားများက ကျေနပ်သဘောကျကာ တိုင်း ရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအား ရှေ့တန်းမှ မကြောက်မရွှံ့ တိုက်ခိုက်နေမှုကြောင့် ရခိုင် စစ်သားများမှာ မကြာခဏ သေဆုံးနေကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ရခိုင်စစ်သားအများစုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ရသေ့တောင်မြို့နယ် အခြေစိုက် ခလရ ၅၃၆ တင်ရင်းမှ ရှေ့တန်းစစ်ကြောင်းတခုသည်လည်း မွန်ပြည်နယ် ရှေ့တန်း သို့ လွန်ခဲ့သောတရက်နှစ်ရက်က ထပ်မံပြီး ထွက်ခွာသွားကြောင်း သိရသည်။
Man dies in bomb blast north of Myanmar capital
Mon 20 Oct 2008, 1:26 GMT
YANGON (Reuters) - A bomb killedaman inatown north of Yangon in the second of two blasts in or near army-ruled Myanmar's capital over the weekend, police said.
The man was killed on Sunday in Shwepyitha Township, about 20 km (12 miles) north of Yangon.
"The bomb exploded at about 5:30 p.m. and one man was killed,"apolice officer told Reuters late on Sunday, saying he could give no further information while an investigation was being carried out.
Another bomb had exploded at about 7:30 p.m. (2 p.m. British time) on Saturday onafootball pitch in Yankin Township in northeastern Yangon, residents and police officials said.
Police had discovered the bomb but were unable to defuse it in time. No one was injured in this blast.
Bomb explosions are fairly common in the former Burma and the junta usually puts the blame on anti-government dissident groups, either armed ethnic groups fighting for greater autonomy or pro-democracy activists.
Four people were injured on September 25 whenabomb went off outside City Hall in Yangon the day before the anniversary ofabloody crackdown on anti-government protesters.
(Reporting by Aung Hla Tun; Editing by Bill Tarrant)
ထိုင်းရဲချုပ်ဟောင်း စလန်း ဗုန်းနတ် (Salang Bunnag) ဦးဆောင်ပြီး ထိုင်းပြည်.သူ.ဒီမိုကရေစီမဟာမိတ်အဖွဲ.သိမ်းပိုက်ထား သောထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ရုံကိုရတဲ့နည်းနဲ.ပြန်လည်သိမ်ပိုက်မယ်လို.ခြိမ်းခြောက်ပြောဆိုပါသည်၊ရဲချုပ်ဟောင်း စလန်းဗုန်နတ်အ နေနဲ. လာမည့် အောက်တိုဘာလ ၂၂ ၇က်နေ.၊ဘာသာရေးပွဲတော်ကျင်းပပြီးစီးရင်ထိုင်းရဲဟောင်းများအယောက်တစ်ထောင် လောက်ကိုဦးဆောင်ပြီးဝန်ကြီးချုပ်ရုံကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်ဖို.အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ္မည်လို.ပြောသွားပါသည်၊
ထိုင်းပြည်သူ.ဒီမိုကရေစီမဟာမိတ်အဖွဲ.၏ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်သူ စူရိယစိုင်းကတစီလာ (Suriyasai Katasila)က လဲအကယ်၍စလန်းဗုန်းနတ်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်မည်ဆိုရင် အချင်းချင်းထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုကိုရှောင်ကြည်ရန်ခက်မည်ဖြစ်ပြီး သွေးစီးသံယိုမှုလမ်းကြောင်းသို.ရောက်သွားနိုင်မည်လို.ပြောပါသည်၊
စလန်းဗုန်းနတ်၏အစီစဉ်လုပ်ဆောင်ချက်ဟာ နောက်ကနေတစ်ယောက်ယောက်ကြိုးကိုင်နေတယ်ဆိုတာကျနော်သံသယမ ရှိပါဘူး၊ယခုလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်လား၊ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းတပ်ဆင်လာဆိုတာကျနော်မပြောနိုင်သေးဘူးလို. စူရိယစိုင်းကတိစီ လာကပြောကြားပါသည်၊
ထို.ကဲ့သို.စိန်ခေါ်မှုဖြစ်နေတဲ့အကြားကပင် ထိုင်းစစ်ဗိုလ်ချုပ်တစ်ယောက်ဖြစ်သူ ခေတ်တိယ စဝပ်ဒိဘွန်(Khattiya Sawasdibol) ကလဲအကယ်၍ထိုင်းစစ်တပ်အာဏာသိမ်းဖို.ကြိုးစားလာမည်ဆိုရင် ကျနော်အနေနဲ.အစိုးရထောက်ခံတဲ့အင်း အားစုတွေကိုစုဆောင်းပြီးဆန်.ကျင်သွားမည်လို.ပြောပါသည်၊သူကပင်၊စစ်တပ်အာဏာသိမ်းရာမှာအသုံးပြုမည့်စစ်သံချပ်ကား များနှင့်စစ်တပ်သုံးကားများကို တိုက်ခိုက်ရန် အစိုးရလိုလာသောအာဏာရှင်ဆန်.ကျင်ရေးဒီမိုကရေတစ်မဟာမိတ်အဖွဲ. (Democratic Alliance against Dictatorship (DAAD)အနေနဲ. ဓါတ်ဆီဗုံးများကိုအသုံးပြုသွားမည်လို.ဆက်ပြောပါသည်၊
အစိုးရထောက်ခံသောရေဒီယိုသတင်းဌာနတစ်ခုမှမိန်.ခွန်းပြောသွားရာမှာ “ဒီအေအေဒီမဟာမိတ်အဖွဲ.တွေကိုနာမည်တပ်ေ ပြာဆိုသွားပြီး အထူးသဖြင့် ဂျွန်လ ၂၄ ရက်နေ.တွင်လှုပ်ရှားသွားခဲ့သောအာဏာရှင်ဆန်.ကျင်ရေးသူများကိုအာဏာသိမ်းပွဲ ဆန်.ကျင်ရေးအတွက်အကူအညီဖြစ်လိမ်.မယ်လို.ပြောပါသည်၊ထိုင်းစစ်သားကိုမုန်းပြီးသာဖြစ်သော ကွန်မြူနစ်တပ်မတော်၏ ခေါင်းဆောင်အဟောင်းများကလဲဒီအေအေဒီအဖွဲ.ကို ကူညီရန်ကတိပေးသွားတယ်လို.သူကဆက်လက်ပြောကြားသည်၊”
“ စစ်သံချပ်ကားတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို.ဓါတ်ဆီဗုံ (Molotov Cocktails) အသုံးပြုနည်းကို ကျယ်ယ်ပြန်န်.လေ့ကျင့်ထားပါသည်၊ဒါ ပေမဲ့၊ထိုင်းနိုင်ငံမှာတစ်ခါမှအသုံးမပြုဖူးပါဘူး၊အကယ်၍ဘန်းကောက်မြို.ပေါ်မှာ စစ်သံချပ်ကားများလှည့်လည်လျှောက်ပတ် နေမည်ဆိုရင် ပြည်သူတွေတန်ပြန်အာဏာသိမ်းပွဲအနေနဲ. ဒီပွဲဟာ ပထမဦးဆုံးပွဲဦးထွက်ဖြစ်ပါသည်၊အာဏာသိမ်းပွဲတွင်းအ သုံးပြုနေသော မြင်းစီးတပ်ရင်းအမှတ်(၄)နဲ.တွဲသုံးလေ့ဖြစ်သောစစ်သံချပ်ကားများဟာ ဟောင်းနေပြီးဖြစ်သဖြင့်မီးဒဏ်ခံနိုင်ရ ည်မရှိဘူးလို. သူကဆက်လက်ပြောကြားပါသည်၊
လုပ်သွားသော ထိုင်းစစ်တပ်အရာရှိကြီးသုံးယောက်ကိုလည် ခေတ် တိယက ရှုတ်ချပြောဆိုသွားသေးတယ်၊
“ယုတ်မာစဉ်းလဲပုံက ဒီလိုဗျ၊ဟိုတစ်နေ.ကစစ်တပ်အရာရှိကြီးတွေဟာ သူတို.ကစစ်ယူနိဖေါင်းအပြည့်နဲ.သူတို.၏စစ်ဦးစီးချုပ် လဲဖြစ်၊ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်လဲဖြစ်သောဝန်ကြီးချုပ်ကိုခြိမ်းခြောက်သွားတဲ့လုပ်ရပ်ပင်ဖြစ်တယ်လို.”ပြောပါသည်၊
အခုလို ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းတပ်ဆင်ကိုထောက်ခံတဲ့အကောင်းကြီးများထင်ထင်ရှားရှားပေါ်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းဟာ ထိုင်းကြည်၊လေ၊ရေစစ်အရာရှိကြီးသုံးယောက်၏ဝန်ကြီးချုပ်နုတ်ထွက်ရေးလေလှိုင်းပေါ်အာဏာသိမ်းပွဲလို.ခေါ်ဝေါ်နေသော အင်တာဗျူပြုလုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းနှင့်ဝန်ကြီးချုပ်လုံးဝမနုတ်ထွက်ဘူးလို.တင်တင်မာမာပြောသွားပြီးနောက်ပိုင်းထွက်ပေါ်လာ
တာဖြစ်တယ်လို.သိရှိရပါသည်၊ထို.အပြင်၊ဒီအေအေဒီအဖွဲ.ခေါင်းဆောင်တစ်ချို.ကို ထိုင်းဘုရင်စော်ကားပြောဆိုမှုဖြင့် တရားရုံ ကဖမ်းခွင့်ဝရမ်ထုတ်ထားပြီးတပ်ဆင်အတွက်တော့ တရားရုံမှချိန်ထားသောရုံချိန်ကိုမတက်ရောက်သဖြင့် ဖမ်းဝရမ်(၅)ခုမြော က်ထုတ်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်၊နောက်ပိုင်းမှား တပ်ဆင်ပိုင်ဆိုင်သောထိုင်းဘတ် (၇၆)ဘီလီယံတန်ဘိုးရှိစည်းစိမ်းဥစ္စာတွေကို နိုင်ငံပိုင်အဖြစ်သိမ်းဆည်းနိုင်ရေးတရားရုံကကြိုးစားနေပါသည်၊တပ်ဆင်ရုံချိန်လာရောက်နိုင်ငံရေးအတွက်ဒီဇင်ဘာလ(၂၅)ရ က်နေ.နောက်ဆုံးထားပြီးပြန်ချိန်ထားပါသည်၊မတက်ရောက်နိုင်ပါကနိုင်ငံပိုင်အဖြစ်အပြီသိမ်းရန်တရားရုံကဆုံးဖြတ်လိမ်မည် လို.သိရှိရပါသည်၊
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းတပ်ဆင်ကိုထောက်ခံတဲ့အုပ်စုတွေဟာ လွန်ခဲ့သောနှစ်များစွာကပင် ထိုင်းဘုရင်စနစ်အဆုံးသတ်ရေး အတွက်အေးအတူပူးအမျှတိုက်ပွဲဝင်သွားကြါရန်ဖင်လန်နိုင်ငံမှာ တွေ.ဆုံပြီး စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တယ်လို. ထိုင်းဘုရင်ထောက်ခံသူ များက စွပ်စွဲပြောဆိုကြပါသည်၊ တပ်ဆင်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ချိန်တွင် အရေးကြီးသောစစ်တပ်ရာထူးနေရာများကိုသူနဲ.နီးစပ်ဆွေ
မျိုးတော်သူများကိုအစားထိုးနေရာပေးခဲ့ပါသည်၊သူ၏အစိုးရသက်တမ်းတစ်လျှောက်မှာလာဘ်စားမှုများ၊အာဏာအလွဲသုံးစား များ၊နှင့်မဲဝယ်၊မဲလိမ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သောကြောင့် (၂၀၀၆)ခုနှစ်တွင်း ထိုင်းစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့ပါသည်၊ထို.သော်ငြားလ ည်၊ တပ်ဆင်တည်ထောင်ခဲ့သော စနစ်ဆိုးကြီးကိုယနေ.အထိဆက်လက်လည်ပတ်နေဆဲဟု ထိုင်းဘုရင်ထောက်ခံသူများက ပြောဆိုနေကြပါသည်၊
ယခုလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ဟာတပ်ဆင်၏ယောက်ဖဖြစ်ပြီး လွန်ခဲ့သော အောက်တိုဘာလ (၇)ရက်နေ.တွင် ထိုင်းပြည်သူ.ဒီမိုက
ရေစီမဟာမိတ်အဖွဲ.၏အစိုးရပေါ်လစီမကြေညာနိုင်ရေးပါလီမာန်ရှေ့ဆန္ဒပြပိတ်ဆို.ပွဲမှာပြင်းထန်းသောမျက်ရည်ဗုံများအသုံးပြု ပြီးဖြိုခွဲခဲ့သဖြင့် ဆန္ဒပြသူနှစ်ယောက်အသက်သေဆုံးပြီး(၅၀၀)နီးပါးဒဏ်ရာရရှိသွားပါသည်၊
(ထိုင်းသတင်းဌာနများနှင့်ရေဒီယိုများမှကိုးကားပြီး မင်းကာန်စီ သုံးသပ်ရေးသားထားပါသည်၊)
ခြံမြေထပ်မံသိမ်းဆည်းမည်ကို ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၏ အကူအညီဖြင့် နေပြည်တော်သို့တိုင်ကြားရန်စီစဉ်
Thu 16 Oct 2008, အာကာ
မုဒုံမြို့နယ် အဘစ်ကျေးရွာအခြေစိုက် အမှတ်(၃၁၈) လက်နက်ကြီးတပ်ရင်းမှ တပ်မြေပြင်ပရှိ ရာဘာခြံ (၂၅၀) ဧကခန့်အား ထပ်မံသိမ်း ဆည်းမည်ကို မခံရပ်နိုင် သော ခြံရှင်များသည် ဘာသာရေးခေါင်ဆောင်များ၏ အကူအညီဖြင့် နေပြည်တော်သို့ တင်ပြရန် စိုင်းပြင်းလျက်ရှိသည်ဟု ၄င်းအသိုင်းအဝိုင်းနှင့် နီးစပ်သူတစ်ဦးက ပြောသည်။
၄င်းတပ်ရင်းသည် လွန်ခဲ့သော အောက်တိုဘာလ (၇) ရက်နေ့တွင် ၄င်းတို့၏ တပ်တွင်းဖူလှုံရေးနှင့် တပ်ရံပုံငွေ ရရှိရန်အတွက် ၄င်းရာဘာခြံမြေ (၂၅၀) ဧကခန့်ကို ထပ်မံသိမ်းဆည်းရန် ခြံရှင်များအား အသိပေးခဲ့ပြီးသည့်နောက်တွင် ယခုကဲ့သို့ တိုင်ကြားရန်အကြောင်းဖြစ် ပေါ်လာခဲ့သည်။
အမှတ် (၃၁၈) လက်နက်ကြီးတပ်ရင်းသည် ယခုကဲ့သို့ တပ်မြေပြင်ပရှိ ခြံမြေများ ကို သိမ်းဆည်းခြင်းသည် (၃)လအတွင်း ဒုတိယအကြိမ်မြောက် သိမ်းဆည်းခြင်းဖြစ်ပြီး ပထမအကြိမ်တွင် ခြံမြေ (၂၀၀) ဧကကျော် သိမ်းဆည်းခဲ့သည်ဟု ခြံရှင်အသိုင်းအဝိုင်း က ဆိုသည်။
ယခုသိမ်းဆည်းရန် အသိပေးခံရသောခြံမြေတွင် ရာဘာပင် (၄၀၀၀၀) ခန့်ရှိပြီး ထက်ဝက်ခန့်မှာ အစေးထုတ်လုပ်နိုင်သော အပင်များဖြစ်သည်ဟု ၄င်းကဆိုသည်။
၄င်း၏ပြောပြချက်အရ ယခုထပ်မံသိမ်းဆည်းမည့် မြေဧက (၂၅၀) ခန့်သည် ၄င်းတပ်ရင်းသို့ တစ်ဧက (၁) သိန်းကျပ် ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး အစေးခြစ်နိူင်သောအ ပင်မှ ထုတ်ပြီးသောအစေး (၃၀ဎ) ကိုလည်း ၄င်းတပ်ရင်းသို့ ထပ်မံပေးဆောင်ရမည်ဟု တပ်ရင်းအရာရှိတို့က ခြံရှင်များအား အကြောင်းကြားထားသည်ဟု ဆိုသည်။
"အစေးခြစ်နိူင်တဲ့ အပင်ရော၊ မခြစ်နိုင်သေးတဲ့ အပင်ရော တစ်ဧက တစ်သိန်း ပေးရမယ်။ နောက်ပြီး ခြစ်နိူင်တဲ့အပင်က အစေးပေါင် (၁၀၀) မှာ သူတို့ကို ပေါင် (၃၀) ပေးရဦးမယ်။ ကျနော်တို့ဘယ်လိုမှ မတတ်နိူင်ဘူး၊ ဘယ်လိုမှ မပေးနိူင်ဘူး၊ ဒါဟာ ကျနော်တို့အပေါ် သက်သက် စော်ကားတာပဲ။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့က ဆရာတော် သံဃာတော်တွေကို အကူအညီတောင်းပြီး နေပြည်တော်ကို တိုင်ကြားဖို့ စီစဉ်ရခြင်း ဖြစ်တယ်'' ဟု ခြံရှင်တစ်ဦးက ပြောသည်။
၄င်းအသိမ်းခံရမည့် ခြံရှင်များသည် မုဒုံမြို့နယ် အဘစ်ကျေးရွာ၊ ဆက်သွယ်ကျေး ရွာနှင့် ဒိုးမားကျေးရွာများမှ ဖြစ်ပြီး ဘာသာရေးခေါင်းဆောင် ကျောင်းထိုင် ဆရာတော် (၇) ပါးအား အသနားခံ အကူအညီတောင်းခဲ့ကြသည်ဟု ၄င်းခြံရှင်က ဆိုသည်။
စစ်အစိုးရသည် တပ်တွင်းဖူလှုံရေးနှင့် တပ်ရန်ပုံငွေအတွက် ကိုယ်အားကိုယ်ကိုး စနစ် ချမှတ်ခဲ့သည့်အတွက် ယခုကဲ့သို့ တပ်မြေပြင်ပမှ ခြံမြေများကို သိမ်းဆည်းရခြင်း ဖြစ်သည်ဟု တပ်မိသားစုအသိုင်းအဝိုင်းမှ ပြောသည်။
လွန်ခဲ့သော သြဂုတ်လ တတိယသီတင်းပတ်တွင်လည်း အမှတ် (၃၁၅) လက်နက်ကြီးတပ်ရင်းမှ သံဖြူဇရပ်မြို့နယ် ဝယ်ဝင်ကရာကျေးရွာနှင့် ပငကျေးရွာတဝိုက်ရှိ ရာဘာခြံ (၂၀၀) ဧကခန့်ကို သိမ်းဆည်းခဲ့သေးသည်။
ဆောင်းပါး - သျှမ်းသံတော်ဆင့်သတင်း
Friday, 17 October 2008 11:13
သည်းခံခြင်း (သို့) ခန္တီတရားသည် ခေါင်းဆောင် အကြီးအကဲတို့တွင် ရှိရမည့် ကျင့်စဉ်တရပ် ဖြစ်၏။ သည်းခံမှုရှိသော ခေါင်းဆောင်ကား တရားဓမ္မ လက်ကိုင်ထားသူ ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံ့ပြဿနာများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းမရှိဘဲနှင့် အာဏာရာထူးတည်မြဲရေးအတွက် စွဲလန်းဖက်တွယ်ရန်သာ ကြိုးစား ကြံစည်ကြသူများကိုမူ ခန္တီတရားရှိသူထက် အရေထူခေါင်းမာသူ မိစ္စာ ဒိဌိအဖြစ် သံသယရှိရပေမည်။
သည်းခံခြင်း (သို့) ခန္တီတရားဆိုသည်မှာ မိမိ၏ပကတိ သဘာ ၀ စိတ်နေစိတ်ထားကို ထိန်းသိမ်းနိုင်သည့်အနေ အထားဖြစ်၏။ မိမိ မလိုလားမနှစ်သက်သည့် အချင်းအရာအမှုကိစ္စ၏ ထိပါးရိုက်ခတ်မှုကို မည်သို့ပင်ခံစားရပါစေ၊ မလှုပ်မရှားမလွှင့်မပါး၊ ခိုင်မာလေးနက်စွာရပ် တည်နိုင်ခြင်းဖြစ်၏။
မိမိအပေါ်ဝေဖန်ထောက်ပြမှု၊ ဖိအားပေးတိုက်တွန်းမှု၊ ထိပါး ဂယက်ရိုက်ခတ်မှုအပေါ်မခံမရပ်နိုင်ဘဲ နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ရှူးတူးရှဲတဲ တုန့် ပြန်တတ်ခြင်းသည် သည်းခံခြင်း၊ ခန္တီတရားနှင့် လားလားမျှမအပ်စပ် မလျော်ညီ ဆန့်ကျင်ဖီလာ ဖြစ်၏။ ခေါင်းမာစွာ မာန်မာနထောင်လွှား ခြင်းသာ ဖြစ်သည်။
ခေါင်းမာမှုဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ အနက်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရ လျှင် - နားထောင်နာယူခြင်း၊ လက်ခံစဉ်းစားခြင်း၊ လက်ကမ်းကြိဆိုခြင်းအလျဉ်းမရှိ၊ ထက်မြက်လိမ္မာမှုနတ္ထိဖြစ်၏။ ထို့ထက်မက မတည်ငြိမ် ခြင်း၊ ကျွတ်ဆတ်ခြင်း၊ အပူအအေးဓါတ်မခံစားနိုင်ခြင်း၊ နူးညံ့သိမ်မွေ့မှု မရှိခြင်း၊ အရေထူခြင်း၊ မျက်နှာပြောင်တိုက်ခြင်း၊ ဟီရိသြတပ္ပကင်း မဲ့ခြင်း စသည်များစုဝေးနေသော နေရာဖြစ်၏။ ခေါင်းမာမှုကို မောက်မာခြင်းဟုလည်း ခေါ်ဆိုနိုင်သည်။ အရေထူ ခေါင်းမာခြင်းသည် အကျင့်ပါစွဲမြဲ သော စရိုက်ဆိုးဖြစ်သည်။
လှည်းနေလှေအောင်း မြင်းဇောင်းမကျန် တနိုင်ငံလုံးပြည်သူ များအနှစ် ၂၀ ကျော်ကြာ အော့နှလုံးနာ၊ ရွံရှာမုန်းတီး နာကျည်းစက် ဆုပ်နေသည်ကို မသိချင်ယောင်ဆောင်ခြင်း၊ မသိကျိုးကျွန်ပြုခြင်းသည် အရေထူမှုဖြစ်၏။ လယ်သမား၊ အလုပ်သမား လက်လုပ်လက်စား လူတန်းစားမရွေး ကျေးလက်မြ့ပြ၀န်ထမ်းလောက ခပ်များများက ဒင်းတို့အား မလိုလား ဖယ်ရှားတွန်းလှန်ပစ်ရန် ကြံစည်ကြိုးပမ်းသည် ကိုအကြမ်းဖက်နှိပ်ကွပ်ခြင်းသည် ခေါင်းမာမိုက်မဲမှုဖြစ်၏။
စစ်အာဏာရှင်စနစ်ပြောင်းလဲပစ်၊ စစ်အာဏာရှင် ယန္တယားဖယ်ရှားပစ်၊ ဒီမိုကရေစီတိုင်းပြည်သစ်ထူထောင်၊ လူထု ဆန္ဒအကောင် အထည်ဖေါ်ဟု ကြွေးကြော်တောင်းဆိုကြသည်ကို မျက်စိစုံမှိတ် အခွင့် အရေးပိတ်ပင်နေခြင်းကား၊ သေနတ်အားကိုး မင်းဆိုးမင်းညစ်တို့၏ကျင့်စဉ် စရိုက်ဉာဉ်ဖြစ်တော့သည်။ ဒင်းတို့၏ အရေထူခေါင်းမာမှု၊ မိုက်တွင်း နက်မှုသည် သည်းခံခွင့်လွတ်မှု ခန္တီတရားနှင့် လားလားမျှ မသက်ဆိုင်၊ ကိုယ်ချင်းစာမှုနှင့် အလျဉ်းမျှ အကြုံးမ၀င်၊ ကောင်းကင်နှင့် မြေလွှာပမာ ဖီလာဆန့်ကျင်ဖြစ်တော့သည်။
၁၉၈၈ စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက်စစ်တပ်မှတတိယမ္ပိအာဏာသိမ်း ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ဆယ်စုနှစ် ၂ ခု ကာလအတွင်း ဗိုလ်သန်းရွှေ စစ်အုပ်စု ဓါးမိုးအုပ်ချုပ်မှုကို အချို့တပ်မတော်အရာရှိများ လက်သင့်မခံဘဲ ပြုပြင် ပြောင်းလဲစေလို၏။ ဗိုလ်မှူးကြီးအေးမြင့်၊ ဗိုလ်မှူးကြီးစိုင်းဝင်းကျော် ၊ ဗိုလ်မှူးဇော်ထွန်း၊ ဗိုလ်မှူးအောင်လင်းထွဋ် စသည့် တပ်မတော်အရာ ရှိ အနည်းစုက ကမ္ဘာ့ဒီမိုကရေစီရေစီးကြောင်းနှင့်အညီ အရှိအတိုင်း အမှန်အတိုင်း တွေးခေါ်မျှော်မြင်တတ်ကြ သော်လည်း နအဖထိပ်သီး များနှင့် ဗမာစစ်တပ်အရာရှိအချို့မှာ သည်းခံမှုနှင့်အရေထူခေါင်းမာမှုကို ခွဲခြားသိမြင် တတ်ခြင်းမရှိကြသေးပေ။
အကြောင်းမှာ ၀မ်းဗိုက်အပါအ၀င် ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်း အားလုံးအပေါ် ဦးနှောက်က ဦးဆောင်ကွပ်ကဲရမည့် အစား၊ ဒင်းတို့၏ဦးနှောက်ကို ဒင်းတို့၏၀မ်းဗိုက်နှင့်အိတ်ထောင်(ပိုက်ဆံအိတ်) က ဦးဆောင်စေခိုင်းနေသော ကြောင့်ဖြစ်၏။ ဤသို့ဖြင့် သည်းခံခွင့်လွှတ်ခြင်း ကိုယ်ချင်းစာတတ်ခြင်းထက် အရေထူခေါင်းမာခြင်းက ၎င်းတို့ အတွေး အမြင်အယူအဆအပေါ် လွှမ်းမိုးခြယ်လှယ် ချုပ်ကိုင်နေခြင်းဖြစ်သည်။
သည်းခံခွင့်လွှတ်ကိုယ်ချင်းစာမှုနှင့် အရေထူခေါင်းမာမှု၊ ဤ သဘောတရားနှစ်ခုကို ဗိုလ်သန်းရွှေစစ်အုပ်စု နားလည် သဘောပေါက် မှု မရှိမချင်း၊စဉ်းစားဝေဖန်ခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာတတ်မှုမရှိမချင်း၊ ဗမာပြည်တွင်း နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု သည်လည်း ခက်ခဲရှည်ကြာ သံသရာ လည်နေဦးမည်ဟု မြင်ယောင်မိပါကြောင်း။
လက်နက်ချ ရလလဖ စခန်းဟောင်းတွင် တိုက်ပွဲဖြစ် စစ်သားတဦး၊ ရဲတဦးသေဆုံး။ ၂ ဦးဒဏ်ရာ ရ
အောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ်။
မကြာခင်က လက်နက်ချသွားသော ရှမ်းပြည်လူမျိုးပေါင်းစုံ ပြည်သူ့ လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (ရလလဖ) အဖွဲ့၏ ဌာနချုပ် တပ်စခန်း နောင်ထောင်ဝ်တွင် တပ်စွဲထားသည့် မြန်မာစစ်တပ်နှင့် ရဲစခန်းကို ပအိုဝ်းအမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (ပီအဲန်အယ်လ်အို)က ယမန်နေ့ညတွင် ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်သဖြင့် မြန်မာစစ်သား တဦး၊ ရဲ တဦး ကျဆုံးပြီး အခြား ၂ ဦး ဒဏ်ရာ ရရှိသည်ဟု ပီအဲန်အယ်လ်အိုက ပြောသည်။
မြန်မာစစ်အစိုးရတပ် ခလရ ၄၂၁ ကို ပီအဲန်အယ်လ်အိုတပ်ဖွဲ့မှ ဗိုလ်မှူးအောင်နိုင် ဦးစီးသည့် တပ်ဖွဲ့က ၀င် ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ပီအဲန်အယ်လ်အို၏ နိုင်ငံရေးနှင့်စည်းရုံးရေးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ခွန်စွဲထိုက ပြောသည်။
“၁၆ ရက်နေ့ည ၁၁ နာရီ ၅၀ အဲဒီအချိန်မှာ ဗိုလ်မှူးအောင်နိုင် ဦးစီးသော ဗိုလ်မှူး ခွန်ကျော်၊ ဗိုလ်မှူး အုန်းမောင်တို့ အဖွဲ့သည် နောင်ထောင်ဝ်မြို့ ခလရ ၄၂၁ တပ်ရင်းကို ၀င်ရောက် တိုက်ခိုက်ပြီးတော့ မီးရှို့ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တယ်။ အဲဒီ ၄၂၁ တပ်ရင်းမှာရှိတဲ့ တပ်သား သိန်းထွန်းတယောက်သေတယ်၊ နောက်ပြီးတော့ တယောက် ဒဏ်ရာရတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ရဲစခန်းတခုကိုလည်း ကျနော်တို့ ၀င် တိုက်လိုက်တယ်။ ရဲစခန်းမှာ ဒုရဲအုပ် ချစ်ကိုအောင်က ဒဏ်ရာရတယ်။ တပ်သား ချစ်ကိုကိုက သေ သွားတယ်။ ”
ဗိုလ်မှူးစိန်ရွှေနှင့် ဗိုလ်မှူးစိုးအောင်လွင်တို့ ဦးဆောင်သည့် ရလလဖ အဖွဲ့ မြန်မာစစ် အစိုးရထံ လက်နက်ချပြီး နောက်ပိုင်း ရလလဖ ဌာနချုပ်ဖြစ်သည့် နောင်ထောင်ဝ်တွင် ပထမဆုံးအကြိမ် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ်သည်။
အခုလို ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်ရခြင်းမှာ ဒေသခံပြည်သူများက တောင်းဆိုလာခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ပီအဲန် အယ်လ်အို အဖွဲ့က ပြောသည်။
“နအဖ စစ်တပ်တွေက အဲဒီမှာရှိတဲ့ ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားတွေကို အနိုင်ကျင့်နှိပ်စက် ပြီးတော့ လုပ် နေတယ်။ အဲဒီမှာ ရှိတဲ့ ရွာသူ ရွာသားတွေက ကျနော်တို့ အဖွဲ့ကို တိုင်ကြား ပြီးတော့မှ ပြည်သူလူထု ရဲ့ သဘောထား ဆန္ဒအရ ကျနော်တို့ ၀င်တိုက်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ကျနော်ပြောလိုပါတယ်။” ဟု ခွန်စွဲထို က ပြောသည်။
ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့သည် ၂၀၀၇ ခုနှစ် ဇွန်လပိုင်းတွင် ရလလဖ တပ်ဖွဲ့မှ ခွဲထွက်ကာ တော ပြန်ခိုပြီးနောက် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (ပီအဲန်အယ်လ်အေ)ဟု ပြောင်းလွဲဖွဲ့စည်းပြီး မြန်မာစစ် အစိုးရကို ဆန့်ကျင်တော်လှန် နေသည့် အဖွဲ့ဖြစ်သည်။
နောင်ထောင်ဝ် ဌာနချုပ်တွင် အခြေစိုက်ခဲ့သည့် ဗိုလ်မှူးစိန်ရွှေ၊ ဗိုလ်မှူးစိုးအောင်လွင် ဦးဆောင်သည့် ရလလဖ တပ်ဖွဲ့သည် မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ ဖိအားပေးမှုကြောင့် ပြီးခဲ့သည့် သြဂုတ်လ ၃ ရက်နေ့တွင် အပြီး လက်နက်ချ ခဲ့သည်။
လူကြီးက လူငယ်ကို အပြစ်တင်
လူငယ်က လူကြီးကို အပြစ်မြင်
ရှေ့ ဆောင်ကလည်း မပီပြင်
၂၂ ရာစု ခရီးဝင်လည်း
Thailand urges citizens to leave Cambodia
(21 mins ago)
Thai Foreign Minister Sompong Amornvivat urged Thai nationals in Cambodia to leave as soon as possible afteragun-battle between troops alongadisputed stretch of their border.
"Thai businessmen who have no need to be in Cambodia now, please rush back to Thailand,'' Sompong said.
"We have our evacuation plan ready,'' he added.
PREAH VIHEAR, Cambodia (Reuters) - Fighting broke out alongadisputed stretch of the Thai-Cambodian border on Wednesday,aReuters photographer at the scene said, saying he had to take cover amid rocket and small-arms fire.
"I heard gunfire all over the place in this area," Reuters photographer Chor Sokunthea said by telephone. "One rocket flew from Thailand over my head and landed. Now you can hear the fighting. They've opened fire."
"I have to findasafe place to hide," he said.
On Monday, Cambodian Prime Minister Hun Sen threatened to turn the area intoa"death zone" unless the Thais retreated by midday Tuesday.
The Thai military said it was ready for war and the Foreign Ministry told Thais to "think twice" before visiting Cambodia, only fives years afteranationalist mob torched the embassy in Phnom Penh in an argument about another ancient Hindu temple.
Tensions have been high since July, when 2,000 soldiers faced off only yards apart in trenches dug intoahillside that until 10 years ago was under the control of remnants of the Khmer Rouge, Pol Pot's guerrilla army.
The dispute flared in July after protesters trying to overthrow the Thai government attacked Bangkok's backing of Phnom Penh's bid to list the Hindu ruins asaWorld Heritage site.
Somchai says Thailand cannot pull out troops now
Prime Minister Somchai Wongsawat said Tuesday that Thailand could not pull out troops from the disputed border area near Preah Vihear temple as demanded by Cambodian Prime Minister Hunsen now.
Somchai said the joint committee of the two countries needed to reach an agreement on how to carry out the pullout first before it could be done.
Hunsen threatened to go forafull war if Thailand did not pull out the troops from the disputed border by noon Tuesday.
Somchai said the armed forces' commanders were discussing the issue and he would summon all agencies concerned to consult on the matter at2pm.
ထိုင်းနှင့်ကမ္ဘောဒီယာနှစ်နိုင်ငံအကြာအငြင်းပွားနေတဲ့နယ်စပ်ဒေသတွင်းတပ်စွဲထားသော ထိုင်းစစ်တပ်ကိုအင်္ဂါနေ.နေ.လယ် ပိုင်းမကျော်ခင်ချက်ချင်းဆုတ်ခွားပေးပါရန်ကမ္ဘောဒီယာဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်စိန်ကရာဇာသံပေးလိုက်ပြီ၊မဆုတ်ခွာရင် သေရေးရှင် ရေးစစ်နယ်မြေတစ်ခု (Life- and -Death Battle Zone )အဖြစ်ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြာပါသည်၊
Cambodia issues ultimatum to Thailand to withdraw
PHNOM PENH, Cambodia (AP) — Cambodia's prime minister has issued an ultimatum to Thailand to withdraw its troops fromadisputed border area by noon or facea"life-and-death battle zone."
Prime Minister Hun Sen's warning Tuesday came amid rising tensions overadisputed stretch of border near the 11th-century Preah Vihear temple.
Hun Sen accuses Thai troops of advancing onaborder area near the temple in an attempt to occupy Cambodian land.
Hun Sen warns that he has "set the timeline for them to withdraw by 12 o'clock." Noon in Cambodia is 1 a.m. EDT.
He says that he had ordered Cambodia's army chiefs to "take full responsibility over this area. It isalife-and-death- battle zone."
Thailand signs to buy power from Burma
(Agencies) - Burma has signed an agreement with Thailand and with Singapore companies to provide electricity fromaBurmese hydro-power project.
State media in Burma said the project in the south of the country will generate 600 megawatts of electricity, but gave few details of the deals.
It is understood that the Electricity Generating Authority of Thailand, or Egat, signed on behalf of Thailand.
Burma is under sanctions by the United States and Europe because of its human rights record.
But the impact of the sanctions has been weakened as neighbours China, India and Thailand spend billions of dollars forashare of Burma's energy resources to solve energy problems at home.
ဘက်စ်ကားပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ရန်ကုန်မှာလူ(၇)ယောက်သေဆုံး၊ပေါက်ကွဲချိန်ဟာ ၂နာရီမိနစ်၃၀မနက်ပိုင်းဖြစ်ပါသည်၊ဈေးသက်တောင့်သက်သာသောသဘာဝဓါတ်ငွေ.
Seven killed in Myanmar bus explosion: police
YANGON (AFP) — Seven passengers were killed and one was injured whenabus exploded in Myanmar's main city Yangon early Monday morning,apolice official said.
The blast occurred at 2:30 am (Sunday 2000 GMT) as the bus headed north through the city, said the police official who did not wish to be named.
The official said the explosion had been caused byafaulty re-fitting of the bus to run on cheaper natural gas instead of petrol,acommon practice in impoverished Myanmar.
practice in impoverished Myanmar.
Myanmar has also been hit byaspate of bombings which authorities have mostly blamed on armed exile groups, but whenabus explosion atabusy Yangon intersection last month and injured three passengers, officials did not say whether it was caused byabomb.
State-run media has also begun blaming blasts on democracy activists, accusing two members of detained opposition leader Aung San Suu Kyi's National League for Democracy (NLD) of bombing pro-government offices in July.
The NLD wonalandslide victory in elections in 1990, but the junta never allowed it to take office and Nobel peace laureate Aung San Suu Kyi has been under house arrest almost continuously since.
The military has ruled Myanmar since 1962, partly justifying its grip on power by claiming the need to fend off ethnic rebellions.
မော်လမြိုင်ဒီကရီကောလိပ်နှင့် ပုသိမ်ဒီကရီကောလိပ်တို့တွင် ကျောင်းအုပ်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဘူးသူ ဒေါက်တာမန်းသက်စံ (PhD) အသက် ၇၉ နှစ်သည် ယမန်နေ့က ရန်ကုန်မြို့ ရွှေတောင်ကြားရပ်ကွက်ရှိ နေအိမ်တွင် နှစ်လုံးရောဂါဖြင့် ရုတ်တရက် ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ဆရာ၏ ဈာပနကိုလာမည့် အောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက် ( သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့) ညနေ ၄ နာရီတွင် ရေဝေးသုသာန်တွင် မီးသင်င်္ဂြိုဟ် အခမ်းအနား ပြုလုပ်မန်ဖြစ်ကြောင်း ကျန်ရစ်သူ မိသားစုတို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ဒေါက်တာမန်းသက်စံကို မော်လမြိုင်မြို့နယ် ကတိုးကော့နှပ် ဇာတိရွာတွင် အဖနိုင်ထွန်းအောင်၊ မိခင်ဒေါ်သိန်းတင် တို့မှ မွေးဖွားခဲ့ပြီး ဓါတုဗေဒ ပညာရပ်ဖြင့် BSင , MSငနှင့် နိုင်ငံခြားတွင် PhD ဘွဲ့တိုကို လေ့လာသင်ယူခဲ့ပါသည်။ ကျန်ရစ်သူဇနီး ဒေါ်ဌေးရီနှင့် သားသမီးနှစ်ဦး ထွန်းကားခဲ့ပါသည်။
မဆလခေတ်တွင် အမှတ် (၂) စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ဒု-ဝန်ကြီး၊ နိုင်ငံတော်ပြည်သူ့တရားသူကြီး အဖွဲ့ဝင်၊ ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဗဟိုသုတေသနလုပ်ငန်းတို့တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဘူးသူဖြစ်သည်၊ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ အပစ်ခတ်ရပ်ပြီး ကာလတွင် ပါတီလက်အောက်ခံ ရာမညအင်တာနေရှင်နယ် ကုမ္မဏီလိမိတက်တွင် အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် ဆောင်ရွက်နေပါသည်။ တက္ကသိုလ်များ မွန်စာပေယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ နာယကအဖြစ် တက္ကသိုလ်ကောလိပ်ကျောင်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ် အမြဲတမ်းပါဝင်ခဲ့ပါသည်။
MNDF တည်ထောင်ခြင်းအနှစ်(၂၀)ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
တူရကီးနိုင်ငံတွင်းရပ်ကားမတော်တဆတိုက်မှုကြောင့်(၁၈)ယောက်သေဆုံးသည့်အထဲမှာအများစုကတော့တရားမ ဝင်မြန်မာနိုင်ငံသားများဖြစ်နေသည် ဟုသတင်းဌာနတစ်ခုမှာဖော်ပြ၊
18 Illegal Immigrants Killed In Crash In Turkey
It said most the dead were from Myanmar.
A small truck carrying illegal immigrants plunged intoariver after overturning onaTurkish highway near the border with Greece on Sunday, killing 18 people and injuring 25 others, Anatolian state news agency said.
It said most of the dead were from Myanmar and Pakistan. The accident happened in the town of Malkara, west of Istanbul,alocal official told Anatolian.
Turkey isamajor trafficking route for illegal immigrants trying to enter the European Union from southeast Asia and the former Soviet Union. They are often transported in overcrowded vehicles.
Journalist and author Ludu Sein Win, 69, sufferedastroke in 1980, his 13th and last year in prison without charge for criticizing the military regime in Myanmar, also known as Burma. Sein Win, who dodges censors by using 15 pseudonyms, still defies the generals by calling on his readers to topple the junta by force.
'I trust the power of the people,' says Ludu Sein Win, who spent 13 years in jail, but is heartened by the outpouring of help to cyclone victims by young people in defiance of the military regime.
YANGON, MYANMAR -- Every breath he takes isastruggle.
Locked inacell, held without charge because he condemned one of the military government's many brutal assaults on dissent, Ludu Sein Win sufferedastroke 28 years ago. It withered his body, but his defiant voice is still strong.
In Myanmar, cyclone continues to takeatoll
Still producing opinion pieces scrawled in shaky longhand, the journalist and author nimbly dodges censors by writing under 15 pseudonyms.
Onarecent afternoon, he sat on the edge of his bed, steadying himself with frail hands pressed flat againstathin mattress.
Every few words, he paused, and pursed his lips. With all the fight left in him, Sein Win, 69, forced his lungs to wheeze in oxygen pumped through the clear plastic tube that tethers him toamachine softly bubbling at his bedside.
"I have never witnessedadictator voluntarily relinquishing his power," said Sein Win, who was imprisoned from 1967 to 1980. "The only way to oust this regime is by force."
Many have been locked up for saying much less since the military seized control of the nation 46 years ago. Yet Sein Win refuses to be cowed. He's drawing new strength from what he calls the formidable force of young people who defied the regime to aid the victims of Tropical Cyclone Nargis.
Many believe that the surge of volunteer spirit among young people, and even well-known entertainers, and the subsequent anger over the government's fumbling response to the cyclone have served to strengthen the pro-democracy movement.
But the May disaster also gave the regimeabreather. Activists say the 20th anniversary ofa1988 student-led uprising is passing without large demonstrations because they want to focus on helping cyclone victims.
That could change suddenly, some predict, if the cost of rice, fuel and other basic needs remains high.
The cyclone brought pummeling winds and surges of seawater that killed at least 85,000 people, mainly in the southern delta region. Thousands more are still missing, bringing the estimated death toll to 110,000. Five months later, the United Nations says more than 2.1 million survivors depend on food aid and other assistance.
The government relief effort was slow and bungled, and authorities tried to trip up local and foreign aid workers eager to fill the breach. Still, thousands of volunteers, mostly young people, loaded up cars, trucks and boats and headed to the cyclone zone, pushing past checkpoints set up to stop them.
When supplies ran out, they went home with photos and stories that shattered the official line that the ruling generals had everything under control. The volunteers' ranks swelled, along with donations, and the myth of an invincible regime fadedalittle more.
"I trust the power of the people, and Nargis showed I'm right," Sein Win said.
"If we can properly use this united force of young people, we can easily topple this regime."
Sein Win believes that the people of Myanmar, also known as Burma, have the courage required to bring down the generals.
A year ago, the generals crushed any hopes ofapeaceful transition to democracy when security forces opened fire on peaceful protesters, killing at least 31 and jailing thousands more. U.N. efforts to broker an accord between the generals and opposition leader Aung San Suu Kyi have also failed. Suu Kyi led her National League for Democracy toalandslide election victory in 1990, but the generals rejected the results and threw her in jail. She remains under house arrest.
In mid-August, when U.N. special envoy Ibrahim Gambari made his fourth mediation visit since the crackdown in September 2007, Suu Kyi refused to see him.
According to reports, Gambari's officials shouted overabullhorn at Suu Kyi's back wall for more than three hours over two days inafailed attempt to speak with her.
With the country's most popular leader silent, Myanmar's people are waiting for someone to rally opposition to the generals.
The regime couldn't stop private relief operations. But its generals still seem determined to keep the volunteers off balance.
Zarganar,apopular comedian banned from the stage for lampooning the regime, ledavolunteer cyclone relief operation until authorities jailed him on June4for publicly criticizing government aid efforts.
Even movie star Kyaw Thu, an idol to millions, and his wife, Shwe Zee Kwet, have faced difficulty in their efforts to provide disaster aid.
The couple were among the first to mobilizearelief mission through their charity, the Free Funeral Services Society. Like other aid groups, it couldn't get enough trucks and boats to move food and medicine fast and far enough.
The military refused to provide transportation, said Shwe Zee Kwet. "Relief didn't get there soon enough and people died because of that."
The stature of Kyaw Thu and his wife grew last fall when they were imprisoned and interrogated foraweek because they delivered food and water to Buddhist monks leading anti-government protests.
Authorities banned him from making movies, so he now devotes his time to the sick and disadvantaged.
In August, Kyaw Thu was ordered to move his charity's headquarters from the Buddhist monastery where its 51 staff members, and 100 volunteers, have worked since 2001. The government offeredanew site, but hasn't issued building permits.
"They say the people of this township don't want us here," his wife said. "How can that be? They are happy because they can come to our clinic every day and get everything free here."
Others, such as Sein Win, have found ways to work around the government's restrictions. Since the generals have banned Sein Win from publishing his work, he uses pen names and allegory to straighten things out in opinion pieces that have appeared in about two dozen local weeklies and magazines.
"We use many metaphors, and tricks, to outsmart the censor board," he said.
In one opinion piece, Sein Win says, he tookastealthy shot at the generals by condemning the U.S.-led invasion of Iraq. Using one of the government's favorite targets to his advantage, Sein Win called President Bushacowboy more willing to shoot than seek peaceful political solutions.
"Burmese people know too well what I mean," the writer said. "I'm urging people to use the language of the gun. Don't waste our time on proposals from the United Nations, this 'dialogue,' this 'national reconciliation.' "
The walls of Sein Win's home are decorated with washed-out posters of roses and lined by high shelves stuffed with hundreds of books. Thousands more are stacked in the loft above his bed. They satisfy an eclectic taste; they include titles on art and poetry,aChe Guevera biography and "The Leadership Secrets of Colin Powell."
The stroke he suffered while in prison, where he spent several years in solitary confinement ina10-by-12-foot cell, has left Sein Win paralyzed on his right side. His heart and lungs are failing. He has been on an oxygen machine for three years.
Yet Sein Win thinks his poor health is his best advantage over the generals.
"They think I'madying old man, sitting in his house 24 hoursaday," he said, smiling with disdain. "They don't want to be blamed if I die in prison.
"I'm notabrave man," he added. "But one person must be foolish enough to speak out about what's really happening here. Only then will the world know the real situation."
Commander Soe Win spends sleepless night over student's movement
ကချင်းကျောင်းသားများ၏ပို.စတာကမ်ပိန်ကြောင့်ဂျွန်လကတည်ကကချင်းပြည်နယ်တွင်တာဝန်ကျနေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်စိုးဝင်းတစ် ယောက်ညကောင်းကောင်းမအိပ်ရဘူး လို.ကချင်းသတင်းဌာနမှာရေးပါသည်၊မောင်စိုးဝင်းတို.အတွက်ညမထွက်ရအမိန်.ကို ညမအိပ်ရအမိန်.ဖြစ်နေပြီလော?
Maj-Gen Soe Win, the Burmese military junta's Northern Military Command commander is spending sleepless nights over the movement unleashed by student activists. Try as he might, he has been unable to stop the poster movement launched by students in his area of control, sources in Kachin State in northern Burma said.
Gen Soe Win has been desperately trying to stop the anti-junta poster movement by underground Kachin University Students in Myitkyina, the capital of Kachin State by deploying different security agencies such as Burmese Army soldiers, police, Special-Branch police, Military Affairs Security Unit (Sa-Ya-Pha) and local members of junta-sponsored Union Solidarity and Development Association (USDA). But till date no student activist could be detained, according to Myitkyina residents.
Asaretaliatory measure and to check activists, former Principal of Officer Training School in Pyi Oo Lwin (Maymyo) in Mandalay Division turned commander of Northern Command (Kachin State) Maj-Gen Soe Win imposed 'tough night curfew' on September 18, the day underground members of All Kachin Students Union (AKSU) pasted about 400 anti-junta posters on A-4 size papers in the heart of the township, saidastudent activist.
The night curfew in the township makes it mandatory for all night markets, roadside shops, stores, commercial movie houses, English Premier League Football Video rooms to close by 10 pm local time. People are not allowed on the roads in Myitkyina during curfew hours, locals said.
Civilian flouting curfew orders have been threatened with imprisonment in No. 1 and No.2police stations in the township. They will also be fined heavily by security agents on duty such as the police, locals added.
Because of the unrest prevailing among the student community, the new Kachin State Commander Maj-Gen Soe Win has been unable to sleep well ever since he was transferred to Kachin State in late June, said sources close to the commander.
Currently, Maj-Gen Soe Win has been checking the Myitkyina University campus in Shatapru Quarter with his personal assistants or inamilitary convoy, said eyewitnesses in Shatapru.
ဗမာစကားနားမလည်သော သျှမ်းအမျိုးသား သေလုမျောပါး ရိုက်နှက်ခံရ
Thursday, 02 October 2008 12:27
ဗမာစကားနားမလည်သော သျှမ်းအမျိုးသားတစ်ယောက် အလုပ်ခိုင်း၍မရ၊ ကလန်ကဆန်လုပ်သည်ဟုဆိုကာ နယ်စပ်ဂိတ်စောင့် ဗမာစစ်သားတို့၏ သေလုမျောပါး ရိုက်နှက်ကန်ကျောက် ခံရပြီး ခြေချင်းခတ်ခံရကြောင်းထိုင်းနယ် စပ်သတင်းရပ်ကွက်ကဆိုပါသည်။
စက်တင်ဘာ ၂၂ ရက် မနက် ၁၀ နာရီက မိုင်းတုံမြို့နယ် နားကောင်းမူးအုပ်စုမှ အသက် ၃၃ နှစ် အမျိုးသား တစ်ယောက် ၎င်း ၏ အဘွားဆေးကုရန် ထိုင်းနယ် နောင်အုပ်သို့ ဆိုင်ကယ်ဖြင့်သွားပို့ရာမှအပြန် BP 1 နယ်စပ် ဂိတ်စောင့် တပ်ကြပ်ကြီးတစ်ယောက်၏ ရိုက်နှက်မှုခံရခြင်း သည်။
၎င်းင်း၏မိတ်ဆွေ နားကောင်းမူးဒေသခံ တစ်ဦးက “သူ့ကို တပ်ကြပ်ကြီး အောင်ထူးက BP 1 ဂိတ်နဲ့ ၆မိုင်လောက် အကွာ မှာရှိတဲ့ နမ့်ယုံးရွာမှာ ဆန်အိတ်သွားတင်ခိုင်းတာ။ သူကဗမာစကားနားမလည်၊ တပ်ကြပ်ကြီးကလည်း သျှမ်းလိုနားမလည်ဆိုတော့ သဘော မပေါက်ကြဘူး။ အဲဒါနဲ့တပ်ကြပ်ကြီးက ကိုယ်တိုင်သွားမယ်ဆိုပြီးသူ့ဆိုင်ကယ် သော့တောင်းတယ်။ သူကမပေးဘူး။ တပ်ကြပ်ကြီး က လုယူတော့ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ပြီး ဗမာစစ်သား ၄-၅ ယောက် ၀ိုင်းထိုးကြိတ်ကန်ကျောက်၊ သူလဲကျသွားတော့ တုတ်တွေနဲ့ ထပ်ရိုက်၊ မေ့မျောလုနီးပါး မထ နိုင်တော့မှ တဲထဲဆွဲခေါ်သွားပြီး ၀ါးပိုးနဲ့ခြေချင်းခတ်ထားလိုက်တယ်” ဟုပြောပြ၏။
“ခင်ဗျားတို့ရွာကလူတစ်ယောက် ခိုင်းတာလဲမလုပ်ပေး၊ လူကိုပြန်ချချင်သေးတယ်။ သူ့ကိုခြေချင်းခတ်ထားလိုက်ပြီ” ဟု နားကောင်း မူးအုပ်စု ဥက္ကဌအား BP 1 ဂိတ်မှ နအဖစစ်တပ်က အကြောင်းကြားရာ ဥက္ကဌက “တပ်ကြပ်ကြီးတို့ကို အနူးအညွှတ် တောင်းပန်ပါတယ်။ သူက ကျပ်ပြည့်တာမဟုတ်ဘူး အရေးမလုပ်ပါနဲ့ဆိုတော့မှ ညနေ ၅ နာရီခွဲမှာ ပြန်လွတ်ပေးတယ် ” ဟု ဆို၏။
“ကျနော့် သူငယ်ချင်း အလကား နာရတာပေါ့ဗျာ။ ဒီမိုင်းပြင်း ခလရ ၄၃ က ရွာသားတွေကို အနိုင်ကျင့်တဲ့နေရာမှာ နာမည်ကြီး၊ ကျေးလက်သမီးပျိုတွေ တွေ့တဲ့နေရာ မုဒိန်းကျင့်တယ်ဆိုတာလဲ သူတို့ပြောင်းမလာခင်ကတဲ့ သတင်း ရနေတော့ ဒီက ဒေသခံတွေ ကျီးလန့်စာစားဖြစ်နေရတယ်။ ဒါတောင်မှ မလွတ်ဘူး” ဟု ၎င်းက ဆက်ပြောပြ၏။
BP 1 ဂိတ်စောင့် မိုင်းပြင်းခလရ ၄၃ သည် ဘီးလှိမ့်ခွန်ဆိုပြီး ဆိုင်ကယ်တစ်စီး ဂိတ်ကြေးဘတ်၂၀၀ ကောက်၏။ ဗမာစကားနားမလည် သဖြင့် အရိုက်ခံသော အဆိုပါအမျိုးသားမှာ သျှမ်းပြည်အလယ်ပိုင်းဇာတိဖြစ်ပြီး နားကောင်းမူး သူနှင့်အိမ်ထောင်ပြုထားသည်မှာ ၂ နှစ်ခန့်သာရှိသေးသည်ဟုဆိုပါသည်။
Thursday, 02 October 2008 14:52
ရခိုင်ပြည်နယ် တောင်ကုတ်မြို့တွက် ဆန္ဒပြပွဲများ ဆက်လက် ပေါ်ပေါက်မည်ကို စိုးရိမ်သဖြင့် လုံခြုံရေးကို အထူး တင်းကျပ်ထားဆဲ ဖြစ်သည်။
အမည်မဖေါ်လိုသူ ဒီမိုကရေစီ အရေး လှုပ်ရှား သူတဦးက “တောင်ကုတ်မြို့ပေါ်က ဒေသခံ ရဲတွေတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သံတွဲတို့ မအီတို့ဘက်က လာတဲ့ ရဲတပ်သား ၅၀ လောက်နဲ့ လုံခြုံရေးကို တင်းကျပ်ထားတာပါ။ တချို့လမ်းဆုံ လမ်းခွတွေမှာဆိုရင် သံဆူးကြိုးတွေကို ခုချိန်ထိ ကာရံထားတဲ့အတွက် လမ်းသွားလမ်းလာတွေ ဒုက္ခ ဖြစ်နေကြရပါတယ်။” ဟုပြောသည်။
၎င်းပြင် အဆိုပါ ရဲတပ်သားများမှာ ရိက္ခာမလုံလောက်သဖြင့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ၊ ဈေးဆိုင်များမှ ငွေများ အတင်းကောက်ခံပြီး စားသောက်ရေး ကိစ္စကို ဖြေရှင်းနေကြရကြောင်း သူက ပြောသည်။
“သူတို့အတွက် အထက်အာဏာပိုင်တွေက ရိက္ခာတွေကို စီစဉ်ပေးတာမရှိတာကြောင့် မြို့ပေါ်က ဈေးဆိုင်တွေ၊ စီးပွားရေးသမားတွေဆီက ငွေတွေကို အတင်းကောက်ခံပြီး သူတို့ရဲ့ စားရေး သောက်ရေးကို ဖြေရှင်းနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ လူထုတွေက သူတို့အတွက် ၀န်ထုပ် ၀န်ပိုးတွေ ဖြစ်နေကြရပါတယ်။”
တောင်ကုတ်မြို့တွင် ဒီမိုကရေစီ အရေး တက်ကြွစွာ လှုပ်ရှားနေသည့် လူငယ် တဒါဇင်ကျော်အား အာဏာပိုင်များက ဖမ်းဆီး ထောင်ချထားပြီး ဖြစ်သော်လည်း ဆက်လက်ပြီး လုံခြုံရေးကို တိုးမြှင့်ချထားသဖြင့် လူထု အတွင်း နားမလည်အောင် ဖြစ်နေကြောင်း သူက ပြောသည်။
တောင်ကုတ်မြို့မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက် တက်ကြွစွာလှုပ်ရှားနေသော မြို့တမြို့ ဖြစ်သဖြင့် အာဏာပိုင်များဘက်က လုံခြုံရေးကို တိုးမြှင့် ချထားပြီး အခြေအနေကို မျက်ခြေ မပြတ်စောင့်ကြည့်နေကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
သိမ်းထားသည့် လိုင်စင်မဲ့ကားများကို လေလံတင် ပြန်ရောင်း